7 Iingcebiso zokuphepha iipokethi eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iindawo ezinika umdla Tips > 7 Iingcebiso zokuphepha iipokethi eYurophu
Ukuhamba eYurophu, Iindawo ezinika umdla Tips
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 22/10/2021)
Iidolophu zakudala zothando, igadi enomtsalane, izikwere ezintle, kutsala izigidi zabakhenkethi eYurophu yonke imihla. Abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela bandwendwela iYurophu ukuya kuphonononga imbali yayo kunye nomtsalane kwaye bazifumane bechongwe ngamaqhinga kwiindawo ezidumileyo zaseYurophu.. Hlala ukhuselekile kuhambo lwakho olumangalisayo ngokulandela ezi ngcebiso ukunqanda iipokethi eYurophu.
1. Iingcebiso zokuphepha iipokethi: Yazi imimandla eyingozi
Ukwazi apho uya khona kudlala indima enkulu ekubeni nelona xesha lilungileyo ebomini bakho. ke, xa uceba iholide yakho e-Itali okanye eFrance, Kuya kufuneka uphande iindawo ekufuneka uzibonile kunye neendawo eziyingozi. Akukho sizathu sakuxhalaba, awuyi kuzifumana kwidabi leqela lemigulukudu, kodwa yonke indawo enendawo ineendawo ezibuthathaka, apho abakhenkethi kufuneka banikele ingqalelo ekhethekileyo kwizinto zabo kwaye balumkele abachola.
Ngokubanzi, iindawo ekufuneka ulumke kuzo, ziindawo ezifana neemarike zentakumba, izikwere ezithandwayo ezixakekileyo, yaye Ukuhanjiwa kawonke-wonke amabala. Yintoni ezabelana ngayo zonke ezi ndawo kukuba zixinene kakhulu, ke ngelixa ujonge kwi-Eiffel Tower okanye eMilan Cathedral, ii-pickpocket zinokungqubeka ngokulula kuwe, kwaye kwimizuzwana nje isipaji sakho simkile. Ukwazi indawo ekungqongileyo kunye nesihlwele sisincoko esiphambili ukunqanda iipokethi eYurophu.
2. Uphando lokuchola ubuqhetseba kunye nobuqhetseba
Umfokazi mhle okanye ukungqubana ngobuqhophololo 2 Olona hlobo lolwaphulo-mthetho luxhaphakileyo eYurophu. Kanye njengoko zonke iidolophu zaseYurophu zinomlingo kunye neempawu zomhlaba ezibabazekayo, ngokufanayo neempawu zokuqokelela. ngoko ke, ukuba unqwenela ukugcina izinto zakho zexabiso, Phanda kwangethuba ukuze ufumane ubuqhophololo obuqhelekileyo kwindawo oya kuyo.
Imizekelo eyongezelelweyo yokuqokelela ubuqhetseba yinto entle ongamaziyo ecela ixesha okanye umkhombandlela. Ngelixa ujonga imephu yakho, okanye ubukele, zisondela zithathe nantoni na epokothweni okanye engxoweni yakho. ke, lumka kwaye ungaweli kwenye ye 12 Olona hlaselo lukhulu lokuhamba emhlabeni.
Paris Ukuya eLondon Nololiwe
Berlin Ukuya eLondon Nololiwe
3. Iingcebiso zokuphepha iipokethi: Shiya izinto ezixabisekileyo kwihotele
Ukushiya ipaspoti, amakhadi etyala, kunye nobucwebe kwisefu ekhuselekileyo yenye yeengcebiso eziphezulu zokuphepha iipokethi eYurophu. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, iipokhethi zinetalente yokwazi ngqo ukuba ungazifumana phi izinto zexabiso ngaphandle kwabakhenkethi abangazange babone. Ngaphezu, namhlanje xa unokuba nekopi yepasipoti yakho kwi-imeyile okanye kwifowuni, okanye ubhukishe amatikiti okubona indawo kwi-intanethi, akukho sizathu sokuthwala yonke imali okanye amakhadi akho okuthenga ngetyala.
ke, ngaphambi kokuba uhambe uzulazule kwenye ezona ntengiso zintle eYurophu, thabatha kuphela imali ezinkozo. Akukho sizathu sokuba uphathe onke amakhadi akho etyala, kodwa ukuba uyanyanzelisa, kusasaza imali kunye namakhadi kwiipokotho ezahlukeneyo zangaphakathi okanye iibhanti zemali.
4. Gcina iiXabiso eziBalulekileyo kwiiPokotho zangaphakathi
Amabhanti emali ngeentsuku zehlobo okanye iipokotho zebhatyi yangaphakathi yindlela entle yokugcina izinto zakho zexabiso zikhuselekile. Eli qhinga lokuhamba kulula ukwenza xa unxibe iileya, Ngexesha lokuwa okanye lasebusika kwaye unokungonwabi xa imozulu ifudumele kwaye ifumile.
Ungathenga iibhanti zemali nakoluphi na uhambo okanye ivenkile yesikhumbuzo ekhaya okanye ngexesha lohambo, umzekelo kwizikhululo zikaloliwe eziphakathi okanye kwizikhululo zeenqwelo moya. Uncedo lokugcina izinto kwiipokotho zangaphakathi licacile, Abaqokeleli bangangqubeka kuwe, kodwa ngekhe ulawule ukufikelela ngaphaya kweepokotho zeebhulukhwe zakho. Le ndlela, Unokonwaba ngokuqhubeka ujikeleza kwaye ujonge iindawo ezimangalisayo eYurophu.
5. Yizisa i-Cross-Body Bag, Hayi ubhaka
Xa ujikeleza iindawo ezintle zaseYurophu, okanye umi emgceni weLouvre kuya kufuneka ukhululeke. Ukunxiba izihlangu ezikhululekileyo kubaluleke kakhulu njengokuba nebhegi enqamlezileyo xa uhamba. Ingxowa yomzimba onqamlezileyo ithetha ukuba ungahambi ngaphandle kwexhala, njengoko kungafuneki ukuba uhlale ujonge egxalabeni ukuze ubone ukuba kukho nabani na ondanda phezu kwakho kwimigca exineneyo..
Ngaphezu, ungabamba nje ibhotile yamanzi okanye isipaji kwibhegi yomzimba. ke, Ukuzisa ibhegi yomzimba onqamlezileyo kufanelekile ukunqanda ukuqokelelwa eYurophu, kunye nokubona indawo ngokulula nangokukhululeka.
6. Iingcebiso zokuphepha iipokethi: Nxiba kwaye usebenze njengendawo yaseKhaya
Enye yezinto enika abakhenkethi kude neepokethi zengcali yifashoni ekhethekileyo yokhenketho: iingxowa, ukunxiba ezemidlalo, kunye nokwenza njengomkhenkethi. Iicathedrals, izikwere zakudala, kwaye uninzi lweempawu zaseYurophu ziyamangalisa kangangokuba abakhenkethi bahlala bema kwaye bajonge nje, okanye uthathe amakhulu emifanekiso.
Elona cebiso lilungileyo lokuthintela ukucholwa kwepokotho eYurophu kukudibanisa nesihlwele salapha ekhaya. ngoko ke, kanye njengoko ujonga ngaphambili kweyona ndawo intle onokuyityelela kwindawo oya kuyo, jonga imeko kunye nenkcubeko yendawo.
ILyon eGeneva noLoliwe
Zurich eGeneva noLoliwe
EParis ukuya eGeneva ngololiwe
UBern waya eGeneva ngololiwe
7. Iingcebiso zokuphepha iipokethi: Ngaba ne-Inshurensi yokuHamba
Ukufumana i-inshurensi yokuhamba ngaphambi kokuba uhambo luyimfuneko. Namhlanje unakho ukuba nezinto zakho ezixabisekileyo kunye nemithwalo yeinshurensi nayo, nje ukuba ilahlekile okanye kule meko, ibiwe. I-inshurensi yokuhamba inokusindisa ubomi ukuba isipaji sakho kunye namakhadi abiwe, kwilizwe lasemzini kungekho mntu wokuhlangula.
Ukuququmbela, ukuhamba yindlela entle yokuhlola iinkcubeko, amazwe kwaye ufumane izimvo ezimangalisayo. Uninzi lwamava okuhamba ayamangalisa kwaye kunqabile kakhulu ukuba abakhenkethi baqubisane nokukha eYurophu. kunjalo, kusoloko kungcono ukuzilungiselela kwaye uthathe amanyathelo okhuseleko, njengokulandela iingcebiso zethu malunga nendlela yokuphepha ukuchongwa eYurophu.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda uceba iholide ekhuselekileyo kwaye alibaleke kuyo nayiphi na indawo eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iingcebiso zokuPhepha iiPokethi eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://www://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-avoid-pickpockets-europe/?lang=xh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ziphephe iipokotho	Europetraveltips	Iipokotho	imikhonyovu	iingcebiso zokuhamba
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
Uhambo loLoliwe, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba eYurophu